Izinto Eziyi-10 Ezilahlekile I-ejensi Yakho Eqhubeka Nokulimaza Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
Izinto Ezi-10 I-ejensi Yakho Ezilahlekile Eziqhubeka Nokulimaza Ibhizinisi Lakho
NgeSonto, Septhemba 19, 2010 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Izolo, ngibe nenjabulo yokwenza i-workshop nesifunda Inhlangano Yesipikha Yavelonkhe, eholwa ngu UKarl Ahlrichs. Ngezikhulumi zomphakathi, kubalulekile ukuba nobukhona bewebhu obukhulu futhi iningi lababekhona limangale ukuthola izikhala ezinkulu kumasu abo.
Okuningi kwalokhu kungenxa yokuthi imboni isishintshe kakhulu… futhi ama-ejensi amaningi awazange aqhubeke. Uma umane ufake iwebhusayithi, kufana nokuvula isitolo phakathi nendawo. Kungaba kuhle, kepha ngeke kukulethele amakhasimende. Nazi izici eziyi-10 okufanele zenziwe i-ejensi yakho lapho ithuthukisa isiza sakho:
Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe - kuyahlekisa ngama-ejensi ukuthi aphinde abambe amaklayenti abo abathumbe ukuthola izibuyekezo nokuhlelwa lapho kunezinhlelo eziningi zokuphatha okuqukethwe ezithandekayo. Izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe zikuvumela ukuthi ungeze futhi uhlele isiza sakho njengoba ufisa, lapho ufisa. I-ejensi yakho kufanele ikwazi ukusebenzisa umklamo wakho cishe kunoma iyiphi injini yethimu yokuphatha okuqukethwe eqinile.
Search injini - uma i-ejensi yakho ingaziqondi izisekelo zokwenza kahle injini yokusesha, udinga ukuthola i-ejensi entsha. Kufana nokwakha isiza esingenasisekelo. Izinjini zokusesha ziyincwadi entsha yocingo… uma ungekho kuyo, ungalindeli ukuthi noma ngubani akuthole. Ngingacindezela ukuthi bakwazi ngisho ukukusiza ngokuhlonza amanye amagama angukhiye aqondisiwe.
Ama-Analytics - kufanele ube nokuqonda okuyisisekelo kwe- analytics nokuthi ungabona kanjani ukuthi yimaphi amakhasi izivakashi zakho ezigxile kukho ukuze ukwazi ukuthuthukisa isiza sakho ngokuhamba kwesikhathi.
Ukubhuloga neVidiyo - Ukubhloga kuzonikeza inkampani yakho izindlela zokuxhumana ngezindaba, iphendule imibuzo ebuzwa njalo futhi yabelane ngempumelelo namathemba akho namakhasimende futhi ibanikeze izindlela zokulandela, ngokubhaliselwe, nangokuxhumana ngokubuyiselwa. Okuphakelayo kwakho kufanele kwaziwe kuwo wonke amakhasi. Ividiyo izokwengeza ithoni kusayithi lakho - yenza izincazelo zemiqondo enzima ibe lula futhi inikeze nesingeniso esihle kubantu abangaphambi kwenkampani yakho.
Ifomu lokuxhumana - Akuwona wonke umuntu ozofuna ukuthatha ifoni akushayele, kepha bavame ukukubhalela ngefomu lakho lokuxhumana. Kuphephile futhi kulula. Abadingi ngisho nokuluhlela… bangavele bakutholele i-akhawunti umakhi wefomu online,I-Formstack , futhi uzobe uvukile futhi ugijime!
Ukusebenza Kwamaselula - Isiza sakho kufanele sibonakale sisihle kuselula Kulula ukwakha i-CSS yeselula (ishidi lesitayela) elenza izivakashi zeselula ukuthi zibhekabheke isayithi lakho, zithole indawo yakho, noma chofoza isixhumanisi sokwenza ucingo lwefoni.
Twitter - I-ejensi yakho kufanele yakhe isizinda esikhangayo sekhasi lakho le-Twitter elifana nokufakwa uphawu kophawu lwesayithi lakho. Kufanele futhi bahlanganise ibhulogi yakho besebenzisa ithuluzi elifana ne-Twitterfeed ukuthumela ngokuzenzakalela izibuyekezo zakho zebhulogi. I-ejensi yakho kufanele futhi ihlanganise i-twitter kusayithi lakho, kungaba ngesithonjana esilula senhlalo noma ngokukhombisa imisebenzi yakho yakamuva kusayithi lakho.
Facebook - I-ejensi yakho kufanele futhi ifake umkhiqizo wakho ekhasini langokwezifiso le-Facebook futhi ihlanganise ibhulogi yakho ngokusebenzisa amanothi noma i-Twitterfeed.
Amakhasi okufika - Izingcingo Zokuzenzela ezenziwe kahle kusayithi lakho zizohlinzeka indlela yokuzibandakanya kwabavakashi bakho futhi ikhasi lokufika lizobaguqula libe ngamakhasimende. I-ejensi yakho kufanele ixoxe nawe ngezinketho zokuthi ungashayela kanjani ukuhola kuwo wonke amakhasi ewebhusayithi yakho - ngamademo, amaphepha amhlophe, amafomu emininingwane ethe xaxa, ama-ebook, ukulandwa, izivivinyo, njll. Eziqoqa imininingwane yokuxhumana nayo.
imeyili Marketing - Izivakashi zewebhusayithi yakho azihlali zikulungele ukuthenga… ezinye zazo zingafuna ukunamathela isikhashana ngaphambi kokuba zinqume ukuthenga. Incwadi yezindaba yamasonto onke noma yanyanga zonke ekhuluma ngolwazi olufanele nolufike ngesikhathi ingaba iqhinga nje. Umenzeli wakho kufanele akwenze usebenze nge-imeyili enophawu oluqinile umhlinzeki wesevisi ye-imeyili, njenge-CircuPress. Okuqukethwe kwebhulogi lakho kungashayela ngisho nama-imeyili wansuku zonke azenzakalelayo ngohlelo lwabo ngakho-ke awudingi ngisho nokungena ngemvume!
Amanye ama-ejensi angahlehlela emuva ekwenzeni wonke lo msebenzi ngaphakathi nangaphandle kwesiza… anginandaba. Cishe sekuyisikhathi lapho bekhuphuka khona namakhasimende abo futhi baqonda ukuthi ukumane ucindezele iwebhusayithi enhle akwanele. Kulezi zinsuku, isu lakho lidinga ukwedlula isiza sakho futhi lifake imithombo yezokuxhumana, ukwenza kahle izinjini zokusesha, namasu wokumaketha angenayo.
Ama-ejensi wokunaka: Uma ungalungiseli amaklayenti akho ukuthi enze sebenzisa ngokuphelele iwebhu, uthatha imali yomsebenzi wesigodlo nje. Amaklayenti akho ancike kuwe ukuze uwakhele ubukhona bewebhu namasu abawanikeza ibhizinisi.
Tags: izinhlanganoagencyAma-Analyticsibhulogiifomu contactuhlelo lokuphatha okuqukethweimeyili MarketingFacebookamakhasi okufikanokwenza kahle kweselulaukusebenzisa ngokugcwele injiniTwitterukukhangisa kwevidiyovlogging
Imithombo Yezokuxhumana I-PR Entsha
Sep 20, 2010 ku-8: 00 AM
Ngangicabanga ukuthi konke lokhu bekujwayelekile manje. Kuyishwa ikakhulukazi ukuthi ezinye izinhlangano azikasebenzisi uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe kwangempela!
Sep 20, 2010 ku-8: 06 AM
Vumelana noMichael! Ngeshwa sisenazo zombili izinhlaka ezisebenza ku-niche yazo futhi ezingaziqondi izidingo zebhizinisi namathuba ngoba azihambisani nezitayela ze-inthanethi, ukusesha kanye nemithombo yezokuxhumana. Futhi, amanye amabhizinisi kufanele asolwe - amanye amabhizinisi awaqapheli amandla okungenziwa isu elihle, ngakho-ke bayothenga isiza eshibhile abangasithenga.
Sep 21, 2010 ku-10: 24 AM
Ekuvinjeni zonke lezi zimfanelo zinengqondo, futhi njengenkampani yewebhu dev sizinikeza amakhasimende ethu, futhi nangaphezulu, njengohlelo lweselula uma lufanelana nemodeli yebhizinisi labo. Ngeshwa amanye amabhizinisi abheka ibhulogi noma kufanele aphathe isayithi labo njengomthwalo, abaningi bazokhetha ukungahambi kulo mzila. Umbono wabo ngothi, kungani ukhubeka ngokuzama ukufaka isithombe esisha kuwebhusayithi yethu futhi sikulungele amahora ambalwa, lapho ngikwazi ukukhokhela unjiniyela wami imizuzu engu-15.
Muva nje umngani wami ukhiqize iwebhusayithi yakhe, kwathi uma ngimbuza ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani, wayengenaso isiqiniseko kodwa kwakungaphezu kwamahora angu-100 ocwaningo, ukuqeqeshwa ngeWordPress nokuqaliswa, nokwenza kabusha — kulungile, uma uhumusha lokho ngesilinganiso sakhe sehora njengomqeqeshi womuntu siqu (cishe u- $ 90), lokho kufinyelela emalini yangempela.
Ngakho-ke, yize zonke lezi zici zinengqondo, abaninimabhizinisi abaningi, kufaka phakathi eyodwa engikhulume naye namuhla, babheka ukubhloga njll njengomunye umsebenzi, futhi abanaso nje isikhathi sokwenza nsuku zonke. Ngakho-ke, uma onjiniyela babo benza lo msebenzi bese bewususa ohlwini lwabo okufanele bakwenze, angikubizi lokho kubanjelwa ukuthunjwa – Ngikubiza lokho ukusetshenziswa kobuhlakani bokulawulwa kwesikhathi.
Sep 21, 2010 ngo-3: 59 PM
Ngiyavuma ngokuphelele, uPreston. Inkinga yami ukuthi ama-ejensi awaxoxi ngisho nethuba lokuthi amaklayenti abo abhale futhi ahlole ukuthi ngabe isu elisebenzayo yini noma cha. Kuyishwa-ke lokho.
Sep 22, 2010 ku-7: 18 AM
Yebo, kuhle ukuthi ngalinye lala maphuzu kufanele kuxoxiswane ngalo futhi libuyekezwe – ukuyeka ukuwanikeza kuyiphutha elikhulu kakhulu. Kwesinye isikhathi kubukeka sengathi ngifuna ukuncenga amakhasimende ukuthi ehle ngomgwaqo we-SMM, kepha amabhizinisi amaningi engihlangana nawo awafuni ukuwathinta-kuphela uma umuntu 'ongathengisi' ukusetshenziswa kwezinsizakalo ebakhombisa okungaba nomphumela, yisho umngani, ngabe bayakhombisa intshisekelo.
Ngicabanga ukuthola onqenqemeni kulo mnotho, ngalinye lalawa maphuzu liyadingeka kunoma yiliphi ibhizinisi, kodwa ngeshwa kusekhona izinkampani ezikhona lapho ezinamawebhusayithi esizukulwane sokuqala akhala ngamakhasi okufika, izingcingo ezenzweni, kanye nebhulogi – okwamanje abanikazi bamabhizinisi bathi “Angilitholi ibhizinisi kwi-Intanethi.” Hhayi, lol, akumangalisi… 😉